Alaabada kahortaga dabka Warshad - Shiinaha alaabooyinka kahortaga dabka Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaasha
Codsiga: Sida aerospace, batroolka, warshadaha kiimikada, korantada, birta, difaaca qaranka, warshadaha fudud iyo dharka iyo dhismayaasha kale ee bannaanka waxay wataan difaaca dabka ee qaybaha birta culus, waxayna si gaar ah ugu habboon yihiin qaar ka mid ah mashaariicda qaab-dhismeedka birta oo leh halista dabka. kiimikooyinka hydrocarbon (sida saliidda, dareeraha, iwm.), Sida injineeriyada kiimikada, garaashka, madal qodista saliidda, jir dhismeedka taageerada xarunta kaydinta saliidda.
Dhismo ku habboon: ku xereen, daahan rullaluistemadka iyo cadayashada loo isticmaali karaa. Adhesion adag: waxay leedahay adhesion xoog leh nooca epoxy, nooca alkyd iyo nooca phenolic antirust primer, oo ah mid adag oo waara, si ballaaran loo isticmaalo, oo leh tayo sare iyo qiimo hooseeya. Qaab dhismeedka birta khafiifka ah ee birta ah ee loo yaqaan 'Cdgc-a-gudaha' oo ah daaha dab-demiska ayaa ku habboon ilaalinta dabka xubnaha xambaara culeyska ee mashaariicda qaab-dhismeedka bir kala duwan oo leh xadka u adkaysiga dabka oo ka weyn 2 saac.
Daawada dabka aan dabka lahayn ee qaab-dhismeedka birta waa shey cusub oo heer sare ah oo ilaalinta deegaanka ah oo ay soo saartay shirkaddayadu iyadoo loo eegayo heerka qaran ee gb14907-2018. Marka sheyga la kululeeyo, qeybta xumbada ku jirta filimku wuu kala daadan doonaa markii la kululeeyo si loo sameeyo cufan isku mid ah iyo kuleel kuleyl ah iyo lakabka kaarboonka ee ku sii fidinaya qiiqa oksijiinta. Si loo ilaaliyo dhismaha birta.
Dhismo ku habboon: ku xereen, daahan rullaluistemadka iyo cadayashada loo isticmaali karaa. Adhesion adag: waxay leedahay adhesion xoog leh nooca epoxy, nooca alkyd iyo nooca phenolic antirust primer, oo ah mid adag oo waara, si ballaaran loo isticmaalo, oo leh tayo sare iyo qiimo hooseeya. Qaab dhismeedka birta khafiifka ah ee birta ah ee loo yaqaan 'Cdgc-a-gudaha' oo ah daaha dab-demiska ayaa ku habboon ilaalinta dabka xubnaha xambaara culeyska ee mashaariicda qaab-dhismeedka bir kala duwan oo leh xadka u adkaysiga dabka oo ka weyn 2 saac. Sida aerospace, batroolka, warshadaha kiimikada, quwadda korontada, birta, difaaca qaranka, warshadaha fudud iyo dharka iyo dhismayaasha kale ee bannaanka waxay wataan difaaca dabka qaybaha culus ee birta, waxayna si gaar ah ugu habboon yihiin qaar ka mid ah mashaariicda qaab-dhismeedka birta oo leh halista dabka ee kiimikooyinka hydrocarbon (sida saliida, dareeraha, iwm.), Sida injineeriyada kiimikada, garaashka, madal qodista saliida, jir dhismeedka taageerada xarunta kaydinta saliida, iwm.